Ukuqhathaniswa kwamacala ohlangothini lwemiqathango ye-ACT I-Admissions Data kwiikholeji zase-Iowa
Itheyibhile engezantsi inokukunceda uqonde ukuba iikholeji ze-Iowa kunye neyunivesithi zihlobo oluhle kumanqaku akho omthetho. Imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe iyahluka ngokubanzi kwiikholeji ezikhethileyo eziya ezikolweni ezamkela uninzi lwabafake izicelo. Icatshulwa elibhekise kwicala ngaphantsi libonisa u-ACT amanqaku aphakathi kwama-50% abafundi ababhalisile.
I-Iowa yeeKholeji zeMatriki Umlinganiselo wokulinganisa (phakathi kwe-50%)
KwiKholeji 21 26 20 25 20 26
IClakeke University 20 25 19 24 18 25
College College 23 29 23 30 23 28
Dordt College 22 27 20 28 21 27
IDyake University 25 30 24 32 24 29
KwiYunivesithi yaseGraceland 18 24 17 23 17 24
University View 18 23 16 23 17 24
ICginnell College 30 33 30 35 28 33
ICoras College 20 25 20 25 18 25
Luther College 23 28 22 29 22 28
IWorldside College 20 26 19 26 18 26
KwiNyuvesi yaseMount Mercy 18 24 17 22 17 24
KwiKholeji yaseNyakatho-ntshona 21 28 20 27 21 28
IYunivesithi yaseStrose 20 25 20 25 19 25
ISimpson College 21 27 20 27 19 27
KwiYunivesithi yaseDubuque 17 22 15 22 16 23
KwiYunivesithi yaseAowa 23 28 22 29 22 28
KwiYunivesithi yaseNorthern Iowa 20 25 19 25 18 25
University of Upper Iowa 17 24 16 23 17 24
KwiKholeji yaseWartburg 21 26 20 27 20 27
Ukuba amanqaku akho angena ngaphakathi okanye ngaphezulu kwezi zigaba, ujolise ekumiseni. Qhubeka ukhumbule ukuba ama-25% abafundi ababhalisile baye bahlawula ngaphantsi kwabo babonwe; ukuba amanqaku akho aphantsi, ungayeki! Kwezinye iimeko, kunokwenzeka ukufumana uvavanyo, kwaye uphinde uthumele amanqaku akho kwizikolo ozifaka kuzo.
Khumbula ukuba ii-ACT izikolo ziyingxenye enye yesicelo. Amagosa avumelekileyo kwiikholeji ezikhethiweyo ze-Iowa ziya kufuna ukufumana irekhodi eliqinileyo lemfundo , isicatshulwa esiphumeleleyo , imisebenzi yentshukumo ebalulekileyo kunye neencwadana ezilungileyo zinconywa . Abanye abafundi abanesicelo esiqinileyo (kodwa amanqaku aphantsi) ngamanye amaxesha ayavunyelwa kwezi zikolo; abanye abafundi abanesicelo esibuthakathaka (kodwa amanqaku aphezulu) awamkelekanga.
Cofa kwigama leenkolo kwitafile ngasentla ukutyelela iprofayili ebanzi kunye neyoluncedo.
Ukuze ufunde kabanzi malunga noMTHETHO olufunekayo kwiintlobo ezahlukeneyo zezikolo, khangela ezi nqaku:
Isaziso seNtshumbulwazi yeMemori kwi-Delphi kwi-Out Exit
Abalawuli beManyano kwi-Battle of Gettysburg
I-Quotes Best 'The Big Bang'
Iingoma kunye neengqungquthela malunga ne-Hispanics ne-immigration
IiRadio Frequencies eU.S. kwiiNqwelo eziLawula iRadio
Izixhobo zePaint 12 neeThuluzi zoMbala
Inyosi yeenkumbi kunye nendlela yokuzikhupha